11 | January | 2017 | Love Joshi
अध्यात्मको सहारा लिन ।
( १ ) अध्यात्मको सहारा लिन ।
१९९७ ( विसं २०५४ )
पर्व – महा शिवरात्री
विद्याभूमि एवं तीर्थस्थल वराणसी ( बनारस / काशी ) मा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धाश्रम साधक परिवारद्वारा शिविरको अायोजना गरिएको थियो । निखिल चेतना केन्द्र, बुटवलको अगुवाइमा नेपालको विभिन्न स्थानबाट शिविर जानेहरूको एक टोली पनि त्यहाँ गएको थियो । कमला र म पनि सहभागी बनेका थियौं । विशेष परिचितहरूमा निर्मल र जमूना राजभण्डारी थिए । टोली नेता डा. एस के धिताल थिए । बस यात्राबाट बनारस पुग्यौं । पावन भूमिमा भब्य शिविर लागेको थियो । शिविर शानदार तवरले संचालन भएको देखें । धार्मिक शिविरमा कतै पनि नेता र राजनीति पसेको देखिन । गुरू भजन , शिव भजन , शिव नृत्य र गुरू प्रवचन अादि मलाई अति नै राम्रो लाग्यो । गुरू दीक्षा लिई सकेपछि महाशिवरात्रीको दिनमा नै शक्तिपात दीक्षा लिने निश्चय गरें । मेरोनिम्ति बगलामुखी दीक्षा लिनु पर्छ भन्ने गुरू बचन भयो । कारण म समस्यामा जेलिएको थिएँ । त्यो बेला मेरो ग्रह दशा राम्रो चलिरहेको थिएन । पंडितजन त्यस्तै भन्थे । फटाहा ,फोहरी र घिन नमान्नेहरूले नाजायज फाइदा लिन नपाएकोमा मलाई भ्रष्टाचारको झुट्ठा मुद्दामा फँसाएका थिए । उपायको खोजिमा म बनारस पुगेको थिएँ । अध्यात्मको सहारा लिन ।
२ डाक्टरलेझैं पूर्जी दिए ।
पुगेको भोलिपल्ट धेरै जसो मानिसहरू गुरूलाई भेट्न होटलमा गए । हामी पनि गयौं । अाधी घंटाको प्रतिक्षापछि भेट्ने पालो अायो । समस्या बताएँ । गुरूको माइला छोरा कैलाशचन्द्र श्रीमालीले भन्नु भयो – “ दोनो हात दिखाअो ।“ तुरून्तै देखाएँ । पुनः वहाँले भन्नु भयो “ चरण प्रणाम करो “ । अर्थ थियो -खुट्टामा ढोग । म अचम्म माने । मन अलमलमा प-यो । अनायासै ढोग्नु पर्दा अात्तिएँ । मैले यसरी कसैलाई ढोगेकै थिएन, जीवनमा । अामाबुबा मेरो चेतना नफुर्दै बितेका हुनाले गोडामा ढोक्नै परेको थिएन । केही प्रतिक्रिया गरिन ,मैले । पहिले गुरूलाई ढोगें । अर्को पल्ट वहाँको छोरालाई । गुरूले डाक्टरलेझैं पूर्जी दिए । लेखिएको थियो – बगलामुखी । मन दुविधामा प-यो । किन ढोगाए मलाई ? हुन त अरूहरूले पनि लम्पसार परेर ढोगी नै रहेका थिए । किन हात देखा भने मलाई ?
( ३ ) बनारसमा गुरू भेट्टाएँ ।
सन् १९९७ ( विसं २०५४ ) महाशिवरात्रीको दिन बगलामुखी शक्तिपात दीक्षा लिने भएँ । प्रातः स्नान गरी मन,बचन र कर्मले शुद्ध भएर दीक्षाको लाईनमा बसें । मन शान्त थियो । कुनै नकारात्मक सोच थिएन, मस्तिष्कमा पनि । अरूले चीया पिए । मलाई पनि पिए हुन्छ भने । तर मन मानेन । पानी पनि बारें । रूघा भने मच्चिएर लागेको थियो । महाशिवरात्रीको पावन दिनमा दीक्षा लिन अवसर पाएकोमा म खुसी थिएँ ।
गुरूले शक्तिपात दीक्षा दिदा वहाँको अाँखामा हेरी रहनु पर्ने बताइयो । दीक्षा पश्चात गोडामा ढोग्न हुन्न भन्ने पनि सिकाइयो । तर धेरैले ढोगेको देखें । मेरो पालो अायो । गुरूले मेरो अाज्ञा चक्रमा बुढी अौंलाले तलमाथि गरेर घोट्नु भयो । मैले अाफ्ना दुबै अाँखा गुरूको नजरसंग जुधाई राखें । निर्मल राजभण्डारीले फोटो खिचे । मैले बगलामुखी दीक्षा पाएँ । मलाई दीक्षा प्रदान गर्ने ब्यक्तित्व थिए – डा.श्री नारायणदत्त श्रीमाली । बनारसमा गुरू भेट्टाएँ ।
४ श्रद्धापूर्वक लिएको दीक्षाकै पहिला परीक्षा गर्नु जरूरी छ भन्ने अडान लिएँ ।
दीक्षा कार्यक्रम सकिएपछि शिव भजन एवं गुरू भजन प्रस्तुत हुन थाल्यो । शिव नाट्यहरू बनारसकै कलाकारहरूले प्रस्तुत गरे । वीच-वीचमा गुरूज्यूबाट अाशिर्वचन र विभिन्न किसिमका शक्तिपात दीक्षा प्रदान हुंदै गयो । दीक्षाकोलागि पहिलेनै पूर्जी काट्नु पर्दथ्यो । विशेष दीक्षाको विशेष मुल्य चुकाउनु पर्थ्यो । मैले पनि बगलामुखी दीक्षाकोलागि भारू तिन हजार एकसय बुझाएको थिएँ । मेरी संगिनीले पनि दीक्षा लिईन् । गुरू च्यादर, जपमाला र गोमुख, गुरू चित्र र मन परेको साहित्य खरिद गर्दा हाम्रो खर्च सकिन लाग्यो । हाम्रो जस्तो हालत अरूहरूको पनि रहेको चाल पाईयो ।
( ५ ) कार्यक्रम संचालकले अनेक समस्याका समाधाननिमित्त चत्कारिक दीक्षाहरूको घोषणा गर्दै गए । रेटमा थोरै छुट दिन थालियो । दीक्षा लिन लालायितहरूले सुनारको पसलमा गएर अाफ्ना गहना बेच्न पनि शुरू गरे । कमलाले पनि एक-दुई गहना बेच्ने इच्छा गरिन् । मैले भीटो लगाएँ । श्रद्धापूर्वक लिएको दीक्षाकै पहिला परीक्षा गर्नु जरूरी छ भन्ने अडान लिएँ । हामीवीच नमीठो विवाद पनि भयो । हामीसंग फर्कने भाडा र बाटोमा चीया पिऊने खर्च मात्र थियो । बुटवल र तानसेनबाट सहभागी केही महानुभावहरूले प्रायः सबै जसो दीक्षा थापे । डोकोभरी नोट ल्याएर निधारभरी दीक्षा थापेको दृश्य देखेर म जिल्ल परें ।
( ६ ) बुद्ध धर्मको हाराहारीमा यो कार्यक्रम विस्तार हुनसक्छ
मंडाकिनी मैदानमा लगाइएको पंडालमा खचाखच भरिएको थियो। निरन्तरको भजन र गुरूको संभाषणले कार्यक्रममा पूर्ण अध्यात्म रसले भरिएको थियो । मनबाट दुःख,पीर र बाधाहरू हटेको अनुभव हुन्थ्यो । सांसारिक मोह बन्धनबाट मुक्त भएको जस्तो भान पर्थ्यो । सहभागीहरू अापसमा शिवीरको भब्यताबारे चर्चा गर्थे । मैले पनि अाफ्नो विचार राखें – यस्तो अध्यात्मिक कार्यक्रमले ब्यापकता पाउन सके मानव कल्याणमा थप अायाम थपिने छ । बुद्ध धर्मको हाराहारीमा यो कार्यक्रम विस्तार हुनसक्छ । तर शिविर अायोजक र गुरूका सहयोगीहरूले कार्यक्रमलाई द्रब्यप्रधान नबनाअोस् । ( क्रमशः)
( ७ ) अाध्यात्मिक कार्यक्रमले ब्यक्तिको जीवनको केही पक्षमा रूपान्तरण ।
बनारस शिविरमा अन्तराष्ट्रिय सिद्धाश्रम साधक परिवारको अाध्यात्मिक कार्यक्रमले ब्यक्तिको जीवनको केही पक्षमा रूपान्तरण / परिवर्तन ल्याएको चर्चा सुनें । साँचो रहेछ । केही महानुभावहरूलाई मैले पहिल्यैदेखि चिनेको थिएँ । ती मैले अादर गर्दै अाएका पनि थिए । उनीहरू धार्मिक भए छन् । उनीहरू मनकारी भए छन् । दाता पनि हुन थालेछन् । सामाजिक पनि भएछन् । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने भएछन् । पहिले जड थिए । सरल भएछन् । मलाई खुसी लाग्यो । तर मेरो बुद्धिले केही अपाच्य पक्ष पनि देख्यो ।
( ८ ) “ जितना लुट सको तो लुट लो । “
तर मेरो बुद्धिले केही अपाच्य पक्ष पनि देख्यो । पहिला त सोचें, मेरो भ्रम होला भनेर । मेरो सोचाइ निष्कर्षमा पुग्यो । डा. श्रीनारायणदत्त श्रीमाली मन्त्र तन्त्र यन्त्र विज्ञान र ज्योतिषशाश्त्रका स्थापित ब्यक्तित्वलाई ऊँचाइमा पु-याउन उनका शिष्य, अनुयायी र अायोजकले गरेको कार्यकलाप अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्यो । केही सहभागीहरू पटक-पटक नारा घन्काउँथे । उदघोषक केही समयको अन्तरालमा विभिन्न सांसारिक समस्या समाधान गर्ने शक्तिपात दीक्षा घोषणा गर्थे । सहुलियतकासाथ दीक्षा प्रदान गर्न डा.श्रीमालीलाई अनुनय विनय गरी चरणमा ढोग्थे । दीक्षा प्रदान गर्दै जाँदा वहाँ लखतरान हुन्थे । पहिलो पटक सहभागी भएकोले होला म चकित परें । म बिरक्त भएँ । अाफ्नो समापन अाशिर्वचन मन्तब्यमा डा.श्रीमालीज्यूले अाफु संसारमा दुई वर्ष अरू रहने हुंदा जति दीक्षा लिई लाभान्वित हुने हो होऊ भने । वहाँ कै बोलीमा यस्तो बोल्नु भएको थियो – “ जितना लुट सको तो लुट लो । “ उच्चतम मर्यादाकासाथ महाशिवरात्रीका दिन बगलामुखी दीक्षा थापेको मान्छे – म बिद्रोही हुन पो थालें । अर्को दिन बिहान सबेरै अापसमा भेटघाट हुंदा “ जय गुरूदेव । “ भनेर अभिवादन गर्थे सहभागीहरू । मैले भन्न थालें – “ जय पशुपितनाथ ।“
( ९ ) कुनै महात्माले “ छु मन्तर “ गरेर कोही पनि समस्या मुक्त हुंदैन
बनारस शिविरको केही कृत्रिमताले मलाई ब्यक्तिगत रूपमा चित्त बुझेन । एक वर्ष पहिले भाग लिई सकेकी परिवार कमला र मित्र जमूना राजभण्डारीको परामर्शमा म भाग लिन गएको थिएँ । मलाई शिविरको माहौलबारे स्पष्ट बताउन नसकेकोमा कमलासंग असन्तोष जनाएँ – “ जीवनमा गर्नु पर्ने संघर्ष गर्न म सधैं तैयार हुन्थें, छु पनि। कुनै महात्माले “ छु मन्तर “ गरेर कोही पनि समस्या मुक्त हुंदैन । भोग्नु पर्ने कुरा त भोग्नै पर्छ । मैले नैतिकता पालन गरेकै छु। शिक्षा क्षेत्रमा निःस्वार्थ सेवा गरिरहेकै छु । ईमान्दारीता पालन गरेकै छु । कुअन्न खाएकै छैन । बाबुको सम्पत्ति त खानु परेन भने अरू कसैको त के कुरा ? अाफ्नै पौरख खाने हामीलाई कस्को अपुताली खानु छ र,अब ? मानिस अज्ञान छन् । केही न केही न अभावले पीरोलिएका हुन्छन् । छिटो समाधान चाहान्छन् । लोभमा पर्दा बिपत पनि अाई पर्छ । मलाई यस्तो जालोमा पर्नु छैन । ”
( १० ) कसै कसैलाई गुरू दीक्षा पश्चात बिद्रोही बनाउँछ ।
काशी / बनारस स्थित पवित्र गंगामा स्नान , काशी विश्वनाथको दर्शन, संकटमोचन हनुमान मन्दिरमा पूजन र विभिन्न मठ मन्दिरको दर्शनको मीठो संझना लिएर हामी घर फर्क्यौं । तर मनमा शिविरको टर्रो सम्झना बाटोभरि नै मथिंगलमा रह्यो । केही सहयात्रीहरूले मेरो तीखो प्रतिक्रिया प्रति सकारात्मक सोचाइ राखी भने – कसै कसैलाई गुरू दीक्षा पश्चात बिद्रोही बनाउँछ । यो नराम्रो लक्षण होइन । कमलालाई मैले भने , “ बुटवल पुगेपछि गुरू च्यादर, जप माला,पोष्टर,कुमकुम र साहित्य सबै सिद्धबाबाको मन्दिरमा समर्पण गरिदिन्छु । यो धर्म मान्ने होइन । चाहियो भने रामनामी च्यादर पशुपतिनाथ मन्दिरमा किनौला । “
( ११ ) गुरूको तसबीर यथास्थानमा रहन दिएँ ।
बनारस शिविरको उहापोह बोकेर बुटवल अाईपुगेको भोलिपल्टै विहान गुरू च्यादर, जप माला,पोष्टर,कुमकुम र साहित्य सबै बोकेर सिद्धबाबा मन्दिर गएँ । ती सामग्री बनारसबाट ल्याएको भनी त्यहाँको पूजारीलाई दान गरें । कमलाले मलाई रोकिन् । तर मैले अाफ्नो हठ छाडिन । कमला चुपचाप बसिन् । कुनै प्रतिवाद गरिनन् । मनमा दुविधा त रही रह्यो । हामी काठमाण्डौं घर अाई पुग्यौं । घरको पूजा कोठामा कमलाले एक वर्ष पहिले बनारसैबाट ल्याएको गुरूको सन्यासी तसबीर थियो । त्यसलाई पनि बागमती नदीमा प्रवाहित गरिदिन्छु भनेर त्यो तसबीर निकाल्न खोजें । निकालौं कि ननिकालौं भनेर अलमलमा परें । मनै भित्रबाट प्रेरणा अायो । पूजा गर्दै अाएको तसबीर निकाल्न उचित हुंदैन । फूल अक्षता यस तसबीरलाई पनि चढाउंछु । ( क्रमशः )
( १२ ) सपनामा अाफूलाई गुरू मन्त्र जपिरहेको पाउँथें ।
गुरूको सन्यासीरूपको तसबीर पूजा स्थलबाट नहटेकोमा कमलालाई केही सन्तोष भयो । मलाई पनि हटाउन मन नलागेकोबारे उनलाई बताएँ । तर मेरो मनमा अाज्ञाचक्रमा ( निधारमा ) दीक्षा थापेर मात्र समस्याको समाधान हुंदैन । कर्म गर्नै पर्दछ । म ब्यक्तिगतरूपमा धर्म,सनातन परम्परा,सन्त महन्त महात्मा र धार्मिक साहित्यमा सापेक्ष रही अाएको थिएँ , छु। तर कुनै पनि कुराको अन्धानुशरण गर्ने बानी भने थिएन । अात्म निरीक्षण र वस्तुगत परीक्षण पश्चात नै ठीक बेठीक छुट्याउने गर्दछु । यो प्रबृत्ति निश्चयनै शिक्षण पेसाले बसाएको हो । धेरै लामो समयसम्म मनमा शंका छाइरह्यो । गुरू मन्त्र जपिन । जप्ने माला माला अादि मैले परित्याग गरिसकेको थिएँ । तर सपनामा अाफूलाई गुरू मन्त्र जपिरहेको पाउँथें ।
( १३ ) सपनामा पनि गुरू दीक्षा ?
सपनामा गुरू मन्त्र जप्नुलाई मैले कुनै महत्व दिएको थिएन । वास्ता पनि गर्न छाडे । तर त्यो जप्ने क्रम छुटेन । गुरू दीक्षा एवं बगलामुखी शक्तिपात दीक्षालाई पनि विश्वास गर्न छाडें । केही दिनको ग्यापपछि सपनामा गुरू मन्त्र जप गर्ने क्रम चल्न थाल्यो । यो मलाई हैरान गर्ने क्रम बन्दै गयो । मैले त्यागी सकेको अास्था जागृत भयो । नकारात्मक सोंचमा अलि – अलि सकारात्मक हुन थाल्यो । झण्डै ६ महिनापछि अनुभूति भयो । विहानको समयमा गुरूदेवबाट मलाई गुरू दीक्षा प्रदान गर्नु भयो । म पहेंलो धोती र च्यादर अोढेको थिएँ । म गुरूदेवको सामुन्ने बसेको थिएँ । वहाँले दीक्षा दिनु भयो । झल्याँस बिउँझें । समय हेरें साढे ४ बजेको थियो । अरे, यो के ? सपनामा पनि गुरू दीक्षा ?
( १४ ) मैले छाडेको गुरू शक्तिले मलाई छाडेन ।
सपना देख्नु र सपनामा अाउने दृश्यहरूले ब्यक्तिको जीवनमा केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरामा मतान्तर छ। सपना अतृप्त मनोभावनाको परिपुरकको रूपमा अाउने गर्दछ । कुनैबेला सपनाले भविश्यमा अाईपर्ने परिणामलाई अग्रिमरूपमा प्रदर्शित गर्ने गर्दछ । सपनाले वर्तमान जीवनलाई भविष्यमा हुन अाउने क्रियाकलापसंग पनि समन्वय गराउँछ । वर्तमान र भविष्यकोबीच सेतु पनि बन्छ ,सपना । सपनाले वर्तमानलाई भविष्यसंग जोड्ने संकेत दिन्छ । परन्तु सपनाका संकेतहरू बुझ्न र विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ । सपनाका नतिजाहरू सकारात्मक वा नकारात्मक हुन सक्छन् ।
विपनामा पाएको दीक्षामाथि मलाई विश्वास थिएन । यसर्थ सपनामा गुरूदेवबाट दीक्षा पाएँ । गुरू एक शक्ति हो,ब्यक्ति हैन । त्यो शक्तिले नै अाफू प्रमाणित हुन खोज्यो । मैले छाडेको गुरू शक्तिले मलाई छाडेन ।